लगानीकर्ताले कम्तिमा १५-२० प्रतिशत नाफा खोजेका हुन्छन्: भरत रानाभाट
भरत रानाभाट स्टक ब्रोकर एशोसिएशन अफ नेपालका अध्यक्ष हुन् । कोहिनूर इन्भेष्टमेन्ट एण्ड सेक्युरिटिज प्रा‍लि (स्टक ब्रोकर न‌ं ३५) का प्रबन्ध निर्देशक समेत हुन् । त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट व्यवस्थापन संकायमा स्नातकोत्तरसम्मको अध्ययन गरेका रानाभाट पोखराका स्थानीय हुन् । शंकरदेव क्याम्पसमा अध्ययन गर्दै गर्दा साधारण शेयर भर्न थालेका उनले सोही समयमा शेयर बजारबारे जानकारी लिने अवसर पाएका हुन् । २०६८ सालमा कोहिनूरले ब्रोकर लाइसेन्स पाएसँगै उनी यो क्षेत्रमा क्रियाशील छन् । जेठ १५ गते आगामी आवको बजेट भाषणपछि सेयर बजार घट्दो क्रममा छ । सेयर बजारमा सुधार गर्नु पर्ने विषय के के छन् ? कस्ता कम्पनीको सेयर किन्दा बढी लाभ हुन्छ ? लगायत समग्र शेयर बजारको अवस्थाबारे केन्द्रित रही गरिएको विकास बहसः
सेयर बजारमा सुधार गर्नुपर्ने विषय के के छन् ?
राम्रो र अन्तर्राष्ट्रिय सेयर बजार बनाउनको लागि अझै धेरै सुधार आवश्यक छ । केही समयअघि अर्थमन्त्रालयले डेपुटी गभर्नर शिवराज श्रेष्ठको नेतृत्वमा गठन गरेको उपसमितिले धेरै राम्रो सुझाव दिएको छ । त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने हो भने बजारमा धेरै सुधार हुन्छ ।
हामी बल्ल अनलाईन ट्रेडिङ सिस्टममा प्रवेश गरेका छौं । विदेशी लगानीकर्तालाई नेपालको पुँजी बजारमा भित्र्याउने, गैरआवासीय नेपालीहरूले नेपाली कम्पनीको सेयर किन्न अवस्था बनाउन अझै धेरै काम गर्नुपर्छ ।
पुँजी बजारको दायरा पनि फराकिलो बनाउन जरुरी छ । नेपालको पुँजी बजारमा अझै पनि इक्विटी शेयर मात्र किनबेच हुन्छ । अरु अप्सन छैन । नयाँ नयाँ अप्सन आउनु आवश्यक छ ।
2019-06-13 - 940 view(s) - bikashnews